Siyi-blog enikezelwe kwiindaba zoncwadi kunye neendaba zokuhlela. Siyakuthanda ukungena kubabhali beklasikhi kunye nodliwanondlebe nabona babhali bakhethiweyo bathanda UDolores Redondo o UMarwan ikwalungiselela ababhali abatsha.
Sinabalandeli abangaphezu kwe-450.000 ye-Twitter kwiakhawunti yethu @Ulwazi Isuka phi
Sithanda ukuhamba ngeziganeko ezahlukeneyo. Ukusukela ngo-2015 besihamba phakathi kwabanye siye kwizikhundla eziphezulu Imbasa yePlanethi kwaye siza kukuxelela malunga nokuphila kunye nokuqala.
Iqela labahleli le-Actualidad Literatura lenziwe liqela le iingcali kuncwadi, ababhali kunye nababhali banikwa amabhaso ahlukeneyo. Ukuba ufuna ukuba yinxalenye yeqela, unako sithumele le fomu ukuba sibe ngumhleli.
Ukusuka kwisivuno seManchega sama-70, ndiphume ndangumfundi, umbhali kunye nefilimu. Emva koko ndiye ndaqala ukufunda ifilology yesiNgesi, ndifundisa kwaye ndiguqulela ulwimi lwaseSaxon kancinci. Ndaye ndagqiba ekubeni ndiqeqeshwe njengopelo kunye nesitayile sokufunda iimpapasho kubapapashi, ababhali abazimeleyo kunye neengcali zonxibelelwano. Ndilawula iiwebhusayithi ezimbini: iMDCA - CORRECCIONES (https://mdcacorrecciones.jimdofree.com/) kunye neMDCA - FUNDA ISINGESI NESPANISHI (https: //mdca-aprende-a-tu-aire-ingles-y-espanol.jimdosite. com /). Ndikwanayo newebhusayithi yokubhala, iMDCA - INOVELAS Y RELATOS https://mdcanovelasyrelatos.jimdofree.com/) kunye nebhlog, iMDCA - QUÉ HAY DE LO MÍO (https://marioladiazcanoarevalo.blogspot.com.es/), apho Ndibhala ngoncwadi, umculo, uthotho lukamabonakude, imiboniso bhanyabhanya kunye nemicimbi yenkcubeko ngokubanzi. Ngolwazi lokuhlela kunye nokubekwa, ndiye ndazipapasha iinoveli ezintlanu: "uMarie", itrilogy yembali "Iingcuka kunye neenkwenkwezi" kunye no "Ngo-Epreli".
I-Bachelor yeMfundo, khankanya ulwimi kunye noncwadi, oluvela eUdone (Universidad de Oriente, Nucleo Nueva Esparta, Venezuela). Unjingalwazi weYunivesithi kwizitulo zembali, uncwadi lwaseSpain nolwaseLatin American, kunye nomculo (ukuvumelana kunye nokudlala isiginci). I-Bachelor yeMfundo, khankanya ulwimi kunye noncwadi, (Udone). Unjingalwazi weYunivesithi kwezoncwadi, ezembali kunye nomculo. Ndisebenza njengombhali, ndimile kwimibongo nakwiimbali zasedolophini. Ezinye zeencwadi zam zezi: "iTranseúnte", amabali; "Imizimba elunxwemeni", ingqokelela yemibongo. Ndisebenza njengomdali womxholo kunye nomhleli wombhalo.
Umhleli nombhali ukusukela ngo-2007. Umthandi wencwadi ukusukela ngo-1981. Lowo undenze ndabanqula? I-Nutcracker kunye no-King of Mice. Ngoku, ukongeza ekubeni ngumfundi, ndingumbhali wamabali abantwana, abantu abancinci, ezothando, amabali kunye neenoveli ezingamanyala. Ungandifumana njengo-Encarni Arcoya okanye uKayla Leiz.
UAna Lena Rivera Muñiz
NdinguAna Lena Rivera, umbhali woluhlu lwenoveli yenqaku elibonisa uGracia San Sebastián. Ityala lokuqala likaGracia, Lo que Callan los Muertos, ufumene iwonga leTorrente Ballester Award 2017 kunye nelokugqibela kwiFernando Lara Award 2017. Bendiwuthanda amaphupha olwaphulo-mthetho ukusukela ebuntwaneni, xa ndashiya iMortadelo kunye neFayilemón zikaPoirot noMiss. Marple, ke emva kweminyaka eliqela njengomphathi kwilizwe elikhulu ndatshintsha ishishini ngenxa yokuthanda kwam: Inoveli yolwaphulo-mthetho. Yazalwa ke uGracia San Sebastián, umphandi ophambili kuthotho lwam lwabacuphi, apho abantu abaqhelekileyo, njengaye nawuphi na umntu, banokuba zizaphuli-mthetho, bade babulale xa ubomi bubabeka kwimeko enzima. Ndazalelwa e-Asturias, ndinesidanga kwezomthetho nakuLawulo lwezoShishino noLawulo kwaye bendihlala eMadrid ukusukela ngeentsuku zam zaseyunivesithi. Ixesha nexesha ndifuna ukuvumba ulwandle, uLwandle lwaseCantabrian, lomelele, oludlamkileyo noluyingozi, njengeenoveli endikubhalela zona.
Njengabachasi abaninzi, ukubek'esweni kwezemfundo kunye nokuzonwabisa okuninzi, kubandakanya ukufunda. Ndiyayixabisa iklasikhi elungileyo kodwa andiyivaleli ibhendi xa into entsha kuncwadi iwela ezandleni zam. Ndiyabulela ukusebenziseka kunye nokulula 'kweencwadi zeencwadi' kodwa ndingomnye wabo bakhetha ukufunda ngokuziva iphepha, njengoko bekusenziwa njalo.
Umbhali wohambo noncwadi, umthandi woonobumba abangaqhelekanga. Njengombhali weentsomi, ndipapashe amabali aphumelele amabhaso eSpain, ePeru naseJapan nakwincwadi ethi Cuentos de las Tierras Calidas.
Injineli kunye nomthandi wamabali. Indlela yam kuncwadi yaqala ngo "Circle of Fire" kaMariane Curley kwaye wadityaniswa no "Toxina" kaRobin Cook. Ndinexesha lokucingela, nokuba ngabantu abadala abancinci okanye abantu abadala. Kwelinye icala, ndiyathanda ukonwabela uthotho olulungileyo, imovie okanye imanga. Nantoni na ehamba nebali nayo yamkelekile. Ndikwangumphathi webhlog yokubhala apho ndibhala uluvo lwam malunga neencwadi endizifundileyo: http://librosdelcielo.blogspot.com/
Isidanga kwi-Hispanic Philology. Ndinomdla wokubhala, ndenze i-Master kwi-Narrative and Writing Writing. Ukusukela ndisemncinci kakhulu ndiluthandile uncwadi, ke kule bhlog ungafumana ezona ngcebiso zibalaseleyo zokubhala inoveli, okanye ukonwabele ukuphononongwa okuhle kweencwadi zakudala.
Ndazalelwa e-Barcelona kwinyanga ephelileyo ye-80s.Ndaphumelela kwi-Pedagogy kwi-UNED, ndenza imfundo indlela yam yobungcali. Kwangelo xesha, ndizithatha njengembali "engahlawulwayo", ndizimisele kakhulu kufundo lwangaphambili kwaye ngakumbi kungquzulwano olunjengemfazwe yoluntu. I-Hobby, le, endiyidibanisa nokufunda, ukuqokelela iincwadi zazo zonke iintlobo kwaye, ngokubanzi, noncwadi kuluhlu lwazo olunokubakho. Ngokubhekisele kwizinto endizithandayo, kufuneka nditsho ukuba eyona ncwadi ndiyithandayo ngu "The Godfather" kaMario Puzzo, isaga yam endiyithandayo yile kaSantiago Posteguillo enikezelwe kwiiPunic Wars, umbhali wam oyintloko nguArturo Pérez-Reverte kunye nesalathiso sam kuncwadi NguDon Francisco Gomez de Quevedo.
Ndazalwa ngemini enye neNkosana uHenry yaseNgilani. Uyinkosana yaseNgilani kwaye ndingulayibrari. Enkosi Karma. (ngaphandle kwesikhuzo).